मोटरसाईकल ठोक्किँदा चार घाईते, दुई गम्भीर – Sadarline
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार १७:२०
दाङ : दाङमा प्रहरी चढेका दुईवटा मोटरसाईकल एकआपसमा ठोक्किँदा चारजना घाईते भएका छन् । घाईतेमध्ये दुईजनाको अवस्था गम्भीर छ । दंगीशरण गाउँपालिका वडा नं. ६ श्रीगाउँमा बुधवार दिउँसो दुबै मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्किँदा दुर्घटना भएको हो ।
दाङको तुलसीपुरबाट पश्चिम दाङतर्फ जाँदै गरको प्रहरी हवलदार कर्णबहादुर ओली सवार भे ९ प २२४६ नम्बरको मोटरसाईकल र पश्चिम दाङबाट तुलसीपुर आउँदै गरेको प्रहरी हवलदार दिपेन्द्र बस्नेत सवार रा २ प २५७४ नम्बरको मोटरसाईकल एक आपसमा ठोक्किएका हुन् । दुर्घटनामा हवलदार रुकुम सानीभेरी गाउँपालिका ८ गरायला निवासी ३२ बर्षीय ओली र उनका छोरा १० बर्षीय एलन ओली गम्भीर घाईते भएको ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रेमबहादुर शाहीले बताए ।
उनका अनुसार सोही मोटरसाईकलमा सवार ओलीका भाई नाता पर्ने दंगीशरण गाउँपालिका ४ मौलीशहर निवासी २३ बर्षीय कर्ण देव ओलीको अबस्था सामान्य छ । प्रहरी हवलदार ओलीले चलाएको गाडिमा तीनजना सवार थिए । ओली तुलसीपुर बसपार्कको शान्ति सुरक्षामा खटिने गरेका छन् ।
त्यस्तै अर्को मोटरसाईकलमा सवार प्रहरी हवलदार ३६ बर्षीय दिपेन्द्र बस्नेतको अवस्था भने सामान्य रहेको छ । बझाङ घर भएका बस्नेत ईलाका प्रहरी कार्यालय खिलतपुरमा कार्यरत छन् । घाईते चारैजनाको राप्ती प्रादेशिक अस्पताल तुलसीपुरमा उपचार भईरहेको छ ।
सदरलाइनडटकम, काठमाण्डौ : सरकारले वृद्धभत्ता तथा एकल महिला भत्ता बढाएको छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले ७० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक भत्ता बढाएर ३ हजार पुर्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बुधवार संयुक्त संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा हाल दिइँदै आएको भत्तामा एक हजार रकम बढाइएको हो । यसअघि […]
११ पुष २०७३, सोमबार ११:१३